मेरो कलम, अहिलेको कलमले गनगन थापा बिरुद्ध लछ्य-भेदन गर्ने छ. तयार छौ, कांग्रेसी मनुवाहरू ? – Sanghiya Online
मेरो कलम, अहिलेको कलमले गनगन थापा बिरुद्ध लछ्य-भेदन गर्ने छ. तयार छौ, कांग्रेसी मनुवाहरू ?
Posted on : November 7, 2017 November 7, 2017 - No Comment
मैले सन् २०१४ को सुरु देखि देखि यो सामाजिक संजालमा फुर्सद पाएको समयमा आफ्नो बिचार अरुका समछ्य प्रस्तुत गर्न थालेको हुँ. आजसम्म मैले लछ्य-भेदन गरेका राजनीतिक मानिसहरू र राजनीतिक संस्थाहरूलाई ठहरै पार्न ९५% सफल भएकोछु र जुन पछ्यमा लेख्दै आएकोछु, त्यो पछ्यका मानिसहरु र संस्थाहरुको बिजय यात्रामा सघाउन सफल हुन सकेकोमा म घमण्डका साथ् गर्भित छु.
अब मेरो यो लछ्य-भेदन गर्ने अभियान हाललाई नेपाली कांग्रेसका बिरुद्ध अझै मर्मान्तक हुनेछ, फुर्सद पाएसम्म. अब केहि दिनमा कांग्रेसी ठिटो गगन थापाको बिरुद्ध मा यो अभियान सुरु गर्नेछु, केहि समयका लागि. तर, कांग्रेसको बिरुद्ध अझै लामो समय जारी रहनेछ, जबसम्म त्यसलाई धराशायी पार्न सकिन्न. त्यसैगरी जातीबादीहरु र साम्प्रदायिक्ताबादीहरु, तराईका जमिन्दार शामन्त ठगहरु र केहि मात्रामा पुर्ब राजाका समर्थकहरुका बिरुद्ध पनि मेरो लछ्य-भेदन अभियान जारिरहनेछ. “माओबादी” केन्द्रका बिरुद्ध अहिले परिस्थिती बुझेर बिराम दिएकोछु. रबिन्द्र मिश्रको बिरुद्ध २ दिन अघी मात्र एउटा बलियो छ्यप्यास्त्र छोडेकोछु.
यो कांग्रेसी ठिटो गगन थापालाई केहि मानिसहरूले उसको ब्यबहार अनुसारको नाम पनि जुराईदिएका छन्. जस्तै- गनगन थापा (अर्थ न बर्थको गुनासा सहित प्यार-प्यार बोलिरहने भएकोले) भन्छन. उसको अर्को नाम गफाडी थापा (धेरै मोटो, चिल्लो, चिप्लो र मिठो बोल्दै हिड्ने, तर कामको नाममा कहिँ कतै ढलेको सिन्को भाँच्न नसक्ने भएकोले). उसको अर्को नाम टप्परटुंया थापा हो (कसैले उसको कुरालाई महत्व नदिए पनि र उसको भनाईमा कत्ती पनि सत्यता नभए पनि कत्ती न आधिकारिक हैशियत भएको जस्तो गरि बोल्दै हिड्ने भएकोले).
आजलाई यो गनगन थापा, गफाडी थापा, टप्परटुंया थापा, अर्थात गगन थापाको बिषयमा यती भनेर बिदा हुन्छु. अर्को पटक उसको बारेमा केहि तथ्य, तथ्यांक र तर्कहरु सहित उपस्थित हुनेछु. धन्यबाद मित्रहरु !
नोबेम्बर ६, २०१७.